Izinwele zeenwele zabafana banamhlanje | Amadoda aQinisekileyo
Sithanda ukwazi ukuba zeziphi iindlela zokulungisa iinwele, kuba sifuna ukwazi eyona nto igqwesileyo kunye nefashoni yakutshanje. Kubo bonke abo bafana banamhlanje abathanda ukwenza isitayile kwezi zinwele zezona zale mihla kwaye benza ukubonakala okwangoku.
Ukuba into yakho kukunxiba iinwele ezimfutshane, siza kukubonisa ezona zitayile zilungileyo kwaye sikunike obo buntu okanye utshintshe into oyifunayo. Siyazi ukuba ukunika olona luvo luhle kuhlala kufanelekile ukunikezela intuition yakho encinci kwaye ufumanise loluphi uhlobo lokusika olufuna imilo yobuso bakho.
1 Iinwele zamakhwenkwe zanamhlanje
1.1 Ukucoca nokucoceka okucocekileyo
1.2 Izinwele ezimnandi
1.4 Ukuphela kwetempile
1.5 Ukuphela okuphantsi okanye iMid Fade
1.7 Ukucheba iinwele ezigobileyo
Iinwele zamakhwenkwe zanamhlanje
Ngexesha ngalinye sinezitayile ezahlukeneyo kunye neenwele ezinokulungiswa kubuntu bethu. Kufuneka senze olona khetho lulungileyo kwaye sazi ukuba leliphi elinokulingana. Iindidi zethu zokucheba iinwele zezala maxesha kwaye zikhona ngoku kangangokuba zinamagama azo:
Ukucoca nokucoceka okucocekileyo
Uninzi lwezinto ezisikiweyo zisesezakudala kwaye akufuneki silibale ukuba ezona zilungileyo zazo soloko inika loo mbonakalo icocekileyo kwaye icocekile. Ukusikwa okuqhelekileyo ngokwahlulahlula icala kuseyeyona isetyenzisiweyo, banokuba nobude obufutshane okanye obude beenwele, zihlala zicocekile kwaye zikhutshiwe ecaleni.
Kukujonga okungcolileyo nokuphambana okusenza sibe nemvukelo kunye neyangoku. Inkuthazo enkulu kuba iyathanda ukuyenza yangoku, kodwa akufuneki silibale ukuba ungayinxiba ngokungakhathali kwaye icwangcisiwe. Ukuba uyazi ukuphatha olu phawu, uya kuhlala uchaza indlela yokwenza ukuba luphawule ubuntu bakho.
Lelo gama esilisebenzisayo namhlanje kwaye ngenene Iinwele zeediliya. Ezi nwele zihamba ngokugqibeleleyo kunye neendevu ezichetyiweyo, ezinde. Isitayile esisikiweyo seHipster sibonakaliswa kukucheba kakuhle kumacala nangasemva, kunye neenwele ezinde ngasemva.
Iphawuleka ngokuba kukucheba okufutshane kumacala entloko nasemva, nokuba ujonga kufutshane akukho sidingo sokulungisa indawo yeetempile kuba ukubuyela ecaleni kwabo akukho. Umphezulu unokwenziwa ngendlela oyithandayo kwaye uhlala usike ngendlela entle.
Ukuphela okuphantsi okanye iMid Fade
Zimbini iinwele ezifanayo kakhulu, kwi Ukuphela okuphantsi sifumana iinwele zangoku, kunye nenxalenye ephezulu eyenzelwe ukuba neenwele zinde kwaye njengoko isikiwe isihla, iyancipha kwaye iqhubeke ide ifike entanyeni.
Ngokusikwa kweMid Fade sifumana uhlobo olufanayo lweenwele, kodwa ukuncipha kokunqunyulwa kwakho kuqala embindini wentloko. Iya kujongeka njengokucheba kweenwele okungaqhelekanga kodwa ikhangeleka inomdla kwaye intle.
Kumadoda aneenwele ezigobileyo unokufumana iinwele ezipholileyo kakhulu ke unokuyiqonda kakuhle le nwele. Isitayile esidibanisa ngokugqibeleleyo phantse zonke iintlobo zokusikwa okuqhubekayo. Ubume bayo bufezekiswa ngokushiya indawo ephezulu ixesha elide kwaye onke amacala achetyiwe, nkqu nokwenza ezinye iinkcukacha ezincinci ngeemilo okanye imigca enesitshetshe.
Le iinwele inxitywa ngokubanzi phakathi kolutsha, njengoko Bayakwazi ukushiya yonke indawo egobileyo ngaphezulu kwentloko kunye neenwele ezinde (isitayile sehipster) kunye namacala asikwe kakuhle kwaye athotywa ngobude. Ukuba awunazo iinwele ezigobileyo kwaye ufuna ukufezekisa, ungayenza ngokufumana imvume.
Uyakhumbula isinwele esithandwayo sikaElvis Presley? Well isimbo sakhe ipompadour edumileyo ayinxiba phezulu yentloko super combed umva. Ubume bayo buvele ngeminyaka yama-80s kodwa ngesimbo sehipster nokuyiqhelanisa nale Pompadour iya kuba kukucheba iinwele kwale mihla.
Oku kunqunyulwa yenye yezona zintle kakhulu, ubude beenwele abukho kuba phantse bushiya iinwele zichetyiwe. Izinwele zishiyeke kancinci ngaphezulu entloko kwaye njengoko ubona ukuba kukucheba iinwele okupholileyo. Yindlela efanelekileyo yokwenza iinwele kuba kunokwenzeka ukuba unxibe iinwele ezingakhange zithathe ixesha elide ukuba zikhathalelwe.
Ukwazi ngakumbi unga malunga neentlobo zeenwele ezimfutshane zamadoda onokungena kuzo kwicandelo lethu iinwele zale ndlela. Ukuba endaweni yoko ufuna ukunxiba iinwele ezinde kwaye iyakudinisa ungazi ukuba ungayinxiba njani, sineenwele ezilungileyo zokukwazi ukuzinxiba. iinwele ezimfutshane, ezingafunekiyo kunye nefashoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Izinwele zabafana banamhlanje